Otu onye ọrụ ibe m na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ na-eweta mma. O gosila m ụfọdụ ngwaahịa ha mezuru maka ndị ahịa ha nwere arịa, ikechi, nkwakọ ngwaahịa na igbe ndị na-eri ọnụ ahịa dị oke mkpa karịa ude mmanụ ahụrụ n'ezie. Ọ na - emekwa ọdịiche niile. Site n'iji nlezianya na-emepụta ma na-akwakọ ngwaahịa ahụ, ha na-enwe ike ịkwụ ụgwọ ihe ruru 4 ma ọ bụ 5 ugboro ọnụahịa nke ude anụ ahụ! Ha na-emezu ọtụtụ iri puku ngwaahịa kwa ụbọchị.